Isikweko kumzekeliso kaHenn Kim | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isikweko sisinceda ukuveza izimvo Ngaphandle koko kunokuba nzima kakhulu ukuyichaza. Sisixhobo esikhulu esisetyenziswa zizo zonke iintlobo zamagcisa ukunika ingxelo kwaye ngamanye amaxesha esijika siye kuwo ukuze siyiqonde ngcono intlalontle, inkcubeko kunye nezopolitiko.
Baninzi abakwiikhathuni abakwimicu zisibonisa ukungathandi kwezigqibo ezahlukeneyo kwezopolitiko okanye ngokungacacanga babonisa ukugxeka kwabo okunamandla kwentshukumo entsha okanye umkhwa otshabalalisa amasiko akudala. UHenn Kim usisa emsebenzini wakhe wobugcisa okanye kuthotho lwemizekelo ngamehlo akhe ukuze angene ngokupheleleyo kwizikweko zakhe ezimbalwa.
Esi sisikweko kumzekeliso ikwasibeka kolunye uhlangothi ngokubhekisele kwizinto ezithile zoluntu. Umnxeba njengoburharha obukrelekrele uyafumaneka nakwezi ndawo kwaye umzobo ocacileyo ocacileyo unokusenza siwele umda okanye inkungu esisibambayo kwingcinga.
Iphakathi indlela yesiqhelo yezinto zemihla ngemihla okanye ngokudlula phambi kwabantu abafanayo apho uKim adlala amakhadi akhe amahle ukuzama ukusikhulula kubo. Umnyama nomhlophe apho kubonakala ngathi uHenn Kim ukhululekile kakhulu ngokungafuneki nganto ngaphandle kwala macala mabini ukubonisa izithunzi, izimvo kunye nokuzisola.
Oko watsala umqulu wephepha ojika ube yifilimu okanye yintoni ivasi yeentyatyambo apho umfazi ephefumla ngokwaneleyo ukuzigcina zime nkqo. Uninzi lwale mizekeliso inika umbukeli indawo yamandla okuthatha into emkhuthazayo okanye emenze ukuba acinge.
Dlala ngalo mbono kumfazie ungahamba uyokuntywila kwisithunzi sakho ukuphantse alahleke okanye eso sibini sangana ngelixa ethatha i-selfie ukuyikhumbula ngelixa amandla ebaleka esiya kwintonga ebambe i-smartphone.
I-Tumblr yakho y I-instagram yakhe.
Olunye uhlobo lomzekeliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Isikweko emfanekisweni esivela emehlweni ombonisi uHenn Kim
UFrançois Brunuelle: Lo mfoti unikezelwe ekukhangeleni izinto ezingadibaniyo kwihlabathi liphela